Shalay Iyo Maanta: Siyaasaddu Ma Laha Saaxiib Joogto Ah Ee Waxay Leedahay Dan Joogto Ah | Anti-Tribalism
← Ra’iisal Wasaare Gaas Oo Xaafiiskiisa Kula Kulmay Ururada Bulshada Rayidka ( War-Saxaafadeed)
Dr. Cali Khaliif Galeyr ”Waxaan leeyahay Dastuurka la sheegayo yaan nalagu qasbin oo turubka ha nalaga baandheeyo” →
Shalay Iyo Maanta: Siyaasaddu Ma Laha Saaxiib Joogto Ah Ee Waxay Leedahay Dan Joogto Ah
28 April 2012 – Sideedaba Siyaasaddu Malaha Saaxiib Joogto Ah, Balse Waxay Leedahay Dan Joogto Ah, Sidoo Kalena Siyaasaddu Malaha Colaad Joogto Ah, Waxaanay Inta Badan Mushtamacu Aad Ula Yaabaan Arrimaha Ka Dhex Dhaca Shakhsiyaad Shalay Rafiiq ku ahaa mabda’a Siyaasadda oo Maanta la arko iyagoon indhaha isa siin karin oo col daahii go’ay ah. Iyadoo sidoo kalena la arko dad shalay siyaasada col ku ahaa oo maantana Rafiiq ku ah mabda’a Siyaasadda, taas oo ah arrin waayaha siyaasadu leedahay in sida dabaysha ay isku badbadaso, isla markaana god kaliya aanay fadhiyin siyaasadu. Haddaba siyaasadu Axdi malaha ee waxay leedahay kolba ninka siyaasiga ahi hadba sidii uu u Arko inay dani ugu jirto, isla markaana ciddii uu u arko inay ku Saaxiibi karaan Siyaasadda ay isku xidhmaan, halka shakhsi hore saaxiibo ay u ahaayeena ay kala irdhoobaan, isla markaana waayaha siyaasadu kala kexeeyo, waxaase jira waxyaalo aanay bulshadu aad u fahmin oo ay aad ula yaabaan, taas oo ah dabeecad ay Siyaasaddu iska leedahay inay dhacaan arrimo amakaag iyo yaab galiya bulshada.
In maanta shacabka Soomaliyeed lagu qasbo qaata dastuur aan waafaqsaneen Diintiina waxaa sabab u ah heshiis la aantii maalintii sawirkaan la qaday
Soomaaliya ayaa soo martay marxalado kala gadisan oo marba dhinac loo waday lakiin xiligaan waxaad moodaa in ay tahay xiligii ugu xumeyd ee soo marta umada Soomaliyed madaama ay hogaanka u hayaan dad doonaaya Soomaaliya in aysan waligeed dowlad noqon oo ey ku jirto jahwareer Ragaasna waxaa uga horeeyo Wasiirka koowaad ee Soomaaliya Cabdi wali gaas iyo wasiirka dasturka Cabdiraxmaan Xoosh oo iyagu ka soo jeeda deegaanka Punland “ Arintaas waxa weeyay (conflict of interest) oo ah Dano isla hor imanayo”.
Waxaa wax lala yabaa in qoomiyad dhan ay labadasi shaqsi kor ku soo xusnay ay ku tilmaamaan kuwa aan waxba garan oo doonaayo isbaara uun hadalkaa uu u muuqda mid lagu wiiqaya siyaasad guud ee Soomaliya dowladaha ku soo dulaana Soomaaliya loogu sii xalaaleynaayo in ay dalka iska sii heystaan si ay qeyraadkiisa u qataan
Waxaa cajiib ah dastuur qasab ku qaata la leeyahay oo diinta iyo dalka waxa u dhimaayo waxaase rumoowday hdalki Cabdi wali gaas ka soo yeeray ee ahaa shalay cod iyo qeylaan ku bur burinaayey shacabka reer Muqdisho maanta qalinkaan uga aar gudanayaa .
Waxaase cajib ah Madaxweyne sheikh Shariif dhanka diinta iyo Jihaad ku noqday madaxweyne sababta uu uga aamusan yahay dastuur lagu gaaleeysiinaayo Soomalida
Dastuurka Soomaaliya dhamaan way diideen shacabka Soomaaliyeed marka laga reebo 3 gobol oo ka mid ah 18 gobol ee Soomaaliya ,shacabka Soomaliyeed dhamaan way ka soo horjedan wax la yiyaahdo Fedaraal madaama ay isku diin iyo dhaqan iyo isku af yihiin .
Waxaa xasuus ah maalintaa sawirka ku cad hadii heshiis dhab ah la gali laha aoo daacad ah dalka Soomaliya maanta dhibkaan kuma jiri laheen waxuu ahaan lahaa dal la jaan qado aduunka hore umaray intii ay Soomaliya ku jirnay dagaal sokeeye
C/wali gaas ” fiiri..fiiri, Nasiib darada jirtaa waxaa weeye Dadka mucaaradaya dastuurka qabyada ah, boqolkiiba 99 maba garanayaan waxyaabaha uu qoraayo mana haboona qofku inuu wax iska diido isagoo aan aqoon u laheyn waxa uu diidayo” Gaas oo la hadlayey idaacada VOA.
Xubno isugu jira sharciyaqaanno, aqoonyahanno & waxgarad ka tirsan qeybaha bulshadda ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan kaga jawaabay dood loo qabtay oo ku saabsan sida ay Puntland isugu gaar yeeshay ololaha lagu sameynayo dastuurka cusub ee loo madlan-yahay in loo sameeyo Soomaaliya, waxaana ay badi aqoonyahanadani oo ka soo jeeda gobolka Banaadir ay qireen in Puntland ay ka soo galeyso sameynta dastuurka habka 4.5 ee lagu saleeyey awood qeybsiga dowladda, ayna la saami tahay beelaha kale ee Soomaalida, balse ay iminka u muuqato in ay hor boodeyso beelaha kale ee Soomaalida. Arintaas waxa weeyay (conflict of interest) oo ah Dano isla hor imanayo.
Hadaba waxaa soo shaac baxeeysa in C/weli caafimaadkiisa xaga maskaxda aay xaqiiq tahay in uusan aheeyn nin caafimaadqaba sabbabta oo ah iyada oo la ogyahay in dastuurka qabyo qoraalka uu yahay dastuur umada somali aayan la jaan qaadi karin laguna dhaqi karin ayuu hadana shacabkii lagu dhaqli lahaa leeyahay aqoon ma laha,haddii aay diideen kuna qeexeen in dastuurka qabyo qoraalka uusan la jaan qaadi karin umada somalida dhaqankeeda.diinteeda iyo dadnimadeeda sow xaq uma laha in aay diidaan iyada oo la ogyahay in uu uu ku qanacsan yahay Puntland dastuurkii lagu ansixiyay oo dhigayay waa in qofka Puntland ahi uu qaataa jinsiyada Puntland halka qabyo qoraalka uu leeyahay cutubka jinsiyadaha qodobka 11 aad :
Barnaamijka Cusub ee uu wato Cabdiweli waa mid laga dhaxlay Cabdullaahi Yusuf oo aanan biyo lagu dhaqin, waxaa umada aay la yaaban tahay hab-dhaqanka R/wasaare C/weli oo aad mararka qaar is leedahay sow ninka ma xishooda miyaa?
Xishoodka waa Qeyb ka mid ah iimaanka weliba xishoodka waa wax lagu amrri jiray xitaa ummadihii naga horeeyey, haddii aad dib u fiiriso waxaa uu ahaa nin mucaarad ku ah maxkamadihii dalka ka hanno qaaday 2006 waxuuna xiligaas u ololeeyn-jiray kuna faraxsanaa gumaadka Ethiopia ee magaalada Muqdisho iyo hogaanka C/aahi Yusuf oo Qabiiliga ahaa.
Dib u aqri maqaalka magaciisu yahay Prof Cabdiweli weli maxaa u wehliya Aqoontiisa 1,2,3, waxaa umada ogtahay shirkii Garowe in uu ahaa mid xaaraan ah sabbabta oo ah Somali oo dhan kama soo qeeybgelin, qodobada ka soo baxay waa kuwa aay mudneeyd in xildhibaanada baarlamaanka ku meelgaarka ahi go’aanka noocaan oo kale aay gaaraan not Faroole iwm.
Ilaah baan idinku dhaariyee ma mudan tahay in dastuurkii qabyada ahaa ee la dhahay waa la soo dhameeystiray anaga oo og in Somali aayan ka warqabin meel lagu dhameeystiray iyo cida dhameeystirtay hirgelintiisa in 825 qof cod u qaadaan ??? ma Somali ayaa 825 ah ??
In 4,5 lagu noqdo ama laga gudbo maaha mid Faroole iwm aay mudneeyn in lagala tashato balse xildhibaanada ku meelgaarka ah ayaa lahaa awoodaa sabbabta oo ah Kenya iyo Jabuuti waxaa awooda iyo xukunka Somalia lagu qeeysaday qabiil dhalay 550 xildhibaan.
Somalida waxaa aay leedahay indheergarad aqoon yahan, siyaasi, culumo , dhalinyaro macnaha noocwalba oo aadahana leeyahay,dhamaan umada waxaa aay aragtaa xishood la´aanta C/weli ee hogaamisay ama ku qasabtay in uu baarlamaanka iyo xulashada gudoomiyaha baarlamaanka Madoowe Nuunow diido, awoodaasi xagee ka keenay ??
Dastuurka ku meelgaarka ahi 71 qodob xagee kaga qoran tahay sharci r/wasaaraha u ogoloonaya in uu faro gashto baarlamaanka ??? sow lama dhihi karo waa aqoon dari iyo xishood la´aan,haddii xishoodka dhinto xaywaanka wax kama duwana qofka.
Waxaa umada aay la yaaban tahay in bisha May Dastuurka qabyada ahaa aay cod u qaadayaan 825 qof, in bisha Jun la dhameeystiri doono xulashada xildhibaanada qaranka 225 sow dhalanteed maaha,kuwa hada jooga ee isku dilaya xaqa iyo xaqdarada ayaa mudneeyd in aay qaataan tiro-dhimista iyo xiliga xildhibaano qaran la sameeyn karo.
Roadmapki baarlamaanka lama geeyn, shirkii gacan ku rimiska ahaa ee Garowe baarlamaanka lama geeyn, dastuurka la soo dhameeystiray baarlamaanka lama geeyn xagee u socdaa C/weli sow lama dhihi karo xishood la ´aan ayaa ku hogaamineeysa ama ku qasbeeysa in uu ku dhaqaaqo wax umada aay ka xishooto Somali koleey waa aay arkeeysaa Faroole iyo C/weli burbur cusub ayaad Somali u horseedeeysiin Punland kama faaiideeyso haddii aad islaheeydeen Puntland ayaa ka faaiideeysa.
Shariif waxaa jirtay xili uu carfayay oo la lahaa shariif amiir iwm maantase waa urayaa sabbabta oo ah waxaa ka fogaaday cadaalada umada Somali waxaana uu noqday nin halgankii umada dib u cunay garan waayay in umada aay leedahay asagana uu ka ahaa hogaamiye kaliya balse kursiga ayuu umada ka doortay,wallow kursiga nina uusan dhaxal u laheeyn. Alow sahal umuuraha!
Ra’iisal Wasaare Gaas Oo Xaafiiskiisa Kula Kulmay Ururada Bulshada Rayidka ( War-Saxaafadeed)
Muqdisho Sunday, April 29th, 2012 – (MMG) Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta kulan la qaatay Uraradda Bulshada Rayidka ah.
Kulanka maanta uu isugu yeeray Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka KMG Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan ee Bulshada Rayidka ah, Iyadoona looga hadlayay Arrimaha Roadmap-ka, Amniga, Dib-u-heshiisiinta, Isgaarsiinta Maamuladda, Dhameystirka Dastuurka, Dib-u-habeynta Baarlamaanka iyo dowlad wanaaga, Iyadoona dowr muhiin ah ay dowladda ka siiyay bulshada rayidka ah.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in kulanka uu ku saabsan yahay in dowladda iyo Bulshada Rayidka ah ay kala warqaataan oo ay is dhaafsadaan fikirado iyo talooyinka ay u hayaan dowladda maadaama ay matalaan Shacabka Soomaaliyeed.
Wuxuu kaloo uu Ra’iisul Wasaaruhu sheegay in Bulshada Rayidka kaalin muhiin ah ka qaataan isbedelladda soo socda si loogu guuleysto hadafka ah in la helo dowladd rasmi ah oo karti leh iyo iney dalka ka saarto marxaladaha adag.
“Bulshada rayidka waa iney kaalin hogaamineed ka qaataan arrimaha bulshada sida, Waxbarashada,Caafimaadka, dhamaan adeegyadda bulshada iyo in Bulshada Rayidka lagu dhiiri geliyo iney si joogta ah ula xisaabtamaan dowladda si loo gaaro maamul wanaag dhameystiran”.
Waxaa kaloo warbixin laga bixiyay Roadmap-ka iyo hormarka laga sameeyay iyadoona la xusan in Roadmap-ka la saxiixay 6-dii September, markaa kadib waxaa bilowday in Soomaalida ay dalka gudihiisa shirar ku qabsadaan kana hadlaan mustaqbalkooda iyagoona isku xirmay gaaridda maamul gobaleedyada, Bulshada Rayidka iyo dowladda.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay in Dastuurka la soo dhameystiray 20-kii April muddo 8 sano kadib, Dastuur ku saleysan Shareecadda Islaamka iyo xeerarka Soomaaliyeed, Wadatashiyo lala sameeyay bulshada rayidka welina ay sii socon doonaan inta laga ansixiyano dastuurka
“135 Oday dhaqameed ayaa soo xuleyso Ergadii Ansixin laheyd Dastuurka oo dhan 825, 15 may ayay isku imaan doonaan oo ay ka doodaan Dastuurka-Ansixintoodana ay noqoneyso mid Kumeel Gaar ah inta laga helayo Afti guud ee Shacabka, iyo in June bartamaheeda Dib u habeyn lagu sameeyo Baarlamaanka la helana Baarlamaan tayo leh”.
Ugu dambeyntii Bulshada Rayidka ayaa lagula dardaarmay iney kaalin hogaamineed ka qaataan oo ay la shaqeeyaan Odey dhaqameedka oo ay ka saacidaan sidii loo soo xulli lahaa Ergo tayo lehoo si wanaagsan uga doodi kara dastuurka kuna sameyn karta isbedelada laga mamaarmaanka ah si ay KMG u ansixiyaan, islamarkaana ay bulshada rayidka ah ay kaalin firfircoon ka qaataan wacyi gelinta bulshada si loo helo bulsho caafimaad qabta oo ka shaqeyso nabadeynta iyo xasilinta dalka iyo waliba in Bulshada Rayidka iyo dowladda ay isku xirmaan oo ay yeeshaan wada shaq1eyn dhab ah iyo in Bulshada Rayidka ay ka mid noqdaan guddiyada soo dhaweynta iyo fulinta shirarka soo socda.
Qodobka kale ee Dastuurkan qabyo qoraalka ah ku jira, ee u baahan in la iftiimiyo ayaa ah Xuduudaha dalka. Dastuurkan qabyo qoraalka ah, laguma qeexin soohdimaha dalka, halka lagu caddeeyey Dastuurkii Dawladdii 1960-kii, ee la qoray maalmihii xorriyadda, Dastuurkii Dalwaddii Carta ee 2000-dii ee laguu soo dhisay Jabuuti, ee C/qaasim Salaad Xasan madaxweyne ka haa iyo Dastuurkii 2004-tii ee DKMG ee lagu soo dhisay wadanka Kenya, ee C/laahi Yuusuf madaxweyne ka ahaa. Arrintan waxaa xoog u yeelaya, in Soomaaliya aysan ku qanacsanayn xuduudihii uu gumeysigu ka tagay, doodna ay ka qabto, wixii dalka dawlado soo marayna marna aysan aqbalin. Haddaba, jihooyinka soohdimahaJamhiiriyadda Soomaaliyeed waxaa lagu qeexaa sidan:
-Waqooyi, waxaa kaga beegan: Gacanka Cadmeed
-Waqooyi Galbeed, waxaa ka xiga: Jabuuti
-Galbeed, Waxaa kaga aaddan: Itoobiya
-Koofur iyo Kuufur Galbeed, waxaa ka jira: Kenya
-Bari, Waxaa kaga dayran: Badweynta Hindiya
Qodobka kale ee Dastuurka qabyo qoraalka ah ka mid ah, ee isna u baahan in la qeexo ayaa ah:Caasimadda Muqdisha, weydiintuna tahay; sidee laga yeelayaa? Dabcan waan filaa, in loo wada joogay murankii laga keenay Muqdisha, intii uu socday Shirkii Garoowe 2, heer la isla gaaray, in ergadii Martida loo ahaa, ay shirka isaga baxaan, marti caroonaysa, oo ergo u fadhida goobta ku bannaysay, xeer ma ka yaal? Hadduu ka yaal, muxuu yahay? In lala tiigsado raggii ku xadgudbay mudan.
Weydiinta u horraysa ayaa ah, maxaa mar walba muran loo galshaa, maqaamka Muqdisha? Magaalooyinka wadanka ugu waaweyn hadal lagama keenee, maxaa Muqdisha kaliya dooddeedu u dhalataa? Kismaayo, Hargaysa, Garoowe iyo magaalooyinka la midka ah, marna ma maqalno muran ku aaddane, maxaa Caasimadda Muqdisha mar walba looga murmaa? Hubaal in ujeed ka dambeeyo.
Mid waan filaa inaan muran ka jirin, in deegaan walba dad leeyahay, xitaa kuwooda bannaan, ee aan markaa la daganayn, aan bal tusaalo ku muujiyo, gobollada dalka, dhammaan lama wada degana, bal Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada “Lama dagaanka ah” ma ahan in dhulkeennu Saxare yahaye, ee maadaama dad ahaan aan aad u yarnahay, dhulkuna aad nooga weyn yahay ayaa sidaa loo yiri.
Haddaba, haddii dhulku naga soo harayo, mayee, aanba ka deggan nahay wax aan dhammayn 13%, maxaa keenay in deeganno la isku qabqabsado? Kumaba sii jirto, haddii is qabqabsigu keenay, in dhul dad leeyihiin la dhaafinayo, sidaa awgeed, Muqdisha dhul ahaan, hubaal in dad leeyahay, Caadimad ay noqotana, dadkii dhulka lahaa kuma weyn karaan.
Maxaa yeelay, sida Dhuusamareeb dad u leeyihiin, ayaa Muqdishana dad u leeyihiin, haddii la yiraa: Muqdisha lama kala xigo, oo waa caasimaddii dalka, saw ma noqonayso: “Waxayga anaa iska leh, waxaaga kula ihi” Micnaha sida Dhuusamareeb dad u leeyihiin, ee aan lala wadaagin, saw ma ahan in Xamarna sidaa noqoto? Taa kama dhalanayso inaysan ahayn caasimadii dalka.
Dhanka kale, waaba su’aale: Miyeysan dhici karin, in Xamar Caasimad ahaato, maamulna ay yeelato, dadna yeeshaan? Weydiinta aan si kala u dhigo: Miyey is diidayaan caasimadnimada Muqdisha iyo Maamul cidi leedahay inay isla noqoto? Wallee Soomaali looga maara waa; sadbirsi iyo xerataraar!
Haddaba, miyeysan habboonayn, inaan dadka la sii kala dilin? Illeen Carrab ku celcelinta Caasimadda Muqdisho dadaa ku sii durgayee, waa haddii la tixgalinayo muwaaddinnimo, walaaltinimo, wadanoolaasho, darisnimo iyo xigaalnimo, haddii kale, colaadda meeshii laga damin lahaa, ha la sii huriyo, wixii laga dhaxlo, yaanba wax la iska siin!
Dastuurro is diiddan
Marka laga soo tago qaab qoraalka Dastuurkan qabyo qoraalka ah, ee la doonayo in dadka lagu siro ama lagu socodsiiyo, waxaa jira Dastuurro kale, oo wadanka ka jira, oo aan aad uga duwanayn midkan hadda la soo wado iyo kuwii horay u jirayba, dabcan waxaa kaw ka ah kan Somaliland, haddana, ma qodobaynayo, illeen iyagu waxayba sheegteen inay dalka ka go’een, una dhaqmayaan sidii dawlad madax bannaan oo kale.
Midse aan caddeeya, in Dastuurka Somaliland yahay Dastuurka qura ee xalaal lagu tilmaami karo, ee looga dhaqmo gudaha Soomaaliya, xalaal waxaan u iri, waa Dastuurka qura, ee afti dadweyne lagu meelmariyay, waxaan wada xusuusannaa kumannaankii Suulka qadda ku wada lahaa, ee Waayeel iyo Dhallinyaro, Rag iyo Haween, Masuul iyo Muwaadinba ka sinnaa, kaliya ma ahan, ee waa Dastuurka qura ee aan qol mugdi ah lagu madiidin, ama toboneeyo aan cidna matelin loo xilsaarin meelmarintiisa, waa tii la yiri: “Xalaal barqaa la quutaa” iyo “Hillaac biyihiisuu caddaystaa”.
Balse, layaabka ayaa ah marka aad akhriso Dastuurka Maamulka Puntland ansixiyey, waxaad arkaysaa wax marna kaa qosliya, marna kaa yaabiya, mudane Faroole inuu sanad kordhistay ka sokow, waxaa Dasturka ku qoran qodobbo la yaab leh, haddaba aan tusaaleeyo:
Waxaa wax lagu qoslo ah, waa magaca ay baxsadeen, bal waa kane aqriste ila eeg: “Dawladda Puntland ee Soomaaliya” Waaba weyndiine, ma dawlad goboleed baa? Mise waa dawlad? Dunida lagama sheegin dawlad dawlad kale ku dhextaal, marka laga reebo Dawladda yar ee “Vatican”ka, ee ku taal Roma ee wadanka Italay, iyana iskama bixine sooyaal iyo saab weyn ayey ku samaysan tahay.
1. Khayraadka dabiiciga ah ee Puntland waxaa leh dadka Puntland, waxaana looga faa’iideeysan karaa si waafaqsan sharciga. Haddaba weydiinta ayaa ah:Puntland ma gobol Soomaaliya ka tirsan baa? Mise waa dawlad madax bannaan?.
2. Dawladda Puntland ayaa ka mas’uul ah ilaalinta iyo ka faa’iidaysiga khayraadkeeda dabiiciga ah. Mar kale weyndiinta ayaa ah: Puntland inay sheegato awooddii dawladda dhexe, ma saxbaa?.
3. Dawladda Puntland waxay heshiis la geli karta shirkado waddani iyo ajnebiba ah, waxayna siin kartaa ruqsadda ka faa’iidaynta khayraadka dabiiciga ah. Mar kale, oo haddaa dawladda dhexe maxay ku qaybsan tahay?.
Aqriste, adoo maanka ku haya qodobka Jinsiyadda ee ku jira Dastuurka qabyo qoraalka, bal Dastuurka Puntland sida uu uga hadlayo eeg, “dadka dawladda Puntland waa dadka haysta jinsiyadda Puntland” Waaba weydiine, Qabiil qura Jinsiyad ma qaybin karaa? Maya, horta isagu ma yeelan karaa? Maya, Puntland ma qabiilbaa mise wa qaran? Maya, Puntland ma dawladbaa mise waa maamul goboleed?
Meesha maradu uga dhacday –aan ka soo amaahdo Shariife- waa sida la isu qabadsiinayo labada Dastuur, kan Puntland meel marisay iyo midkan qabyada ah ee la soo wado, aqriste bal sida ku qoran Dastuurka Puntland eeg:
1. Marka dadweynaha Soomaaliyeed afti ku meelmariyo Dastuurka Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya, ayaa Golaha Wakiillada ee Puntland wuxuu magacaabayaa guddi gaar ah oo ka kooban xubno ka tirsan Golaha Wakiillada iyo xubno isugu jira Aqoonyahanno Sharci yaqaanno iyo Garsoorayaal ay xukuumaddu soo jeediso, si ay dib u eegid ugu sameeyaan Dastuurka Puntland una hubsadaan arimaha ay ku kala gadisan yihiin labada Dastuur, inta aynan ogolaan Dastuurka Fedaraalka.
2. Inta lagu dhammaystirayo Dastuur Federaal ah oo Puntland ansixisay, dabadeedna afti dadweyne lagu meelmariyo, Puntland waxay lahaaneysaa awood Dawlad madax bannaan.
Midda meesha ku jirta ayaase ah, maxaa Somaliland guddi ay ku jiraan iyagu loogu dirayaa, iyaga ayaaba u baahan wax guddi u diree, oo ka keena inay go’een iyo inay gayiga Soomaali la wadaagaan?.
Dastuurkan qabyo qoraalka ah, ee DKMG ah soo waddo, marka laga soo tago qaab darradiisa iyo qodobada is diiddan ee ku jira ama ku qoran dastuurrada kale ee dalka laga hirgaliyey, waxaa jira aragtiyo kala duwan oo laga baxshay, ayna ka dhiibteen qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed, siyaasiyiin, aqoon yahanno, garsoorayaal, sharci yahanno, qareenno iyo aqoon yahanno, oo dhammaan wada muujiyeen walaaca iyo walwalka ay ka qabaan dastuurkan oo sidan lagu dhaqangaliyo.
Ra’isul wasaare Gaas oo muddo sii horreesay ka badbaaday qaarijin sida hadalka loo dhigay, hoygiisiina ka huleelay, waaba hadduu hurdee, ayaa maalmahaan Wardigiisu noqday ansixinta dastuurka, goob walba, iyo goor walba wuxuu ku celceliyaa in dastuurka la qaato, dabcan waa sida uu jecel yehee, siyaasina waa yehee, wali iskuma dayin inuu dadka ka qanciyo qodobada dareenka dhaliyey dooddana keenay, taa badalkeed, wuxuu fekerkiisa isugu geeyey kaliya inuu naadiyo in dastuurka la qaato.
Dhanka kale, waxaa isa soo tara cabashada laga muujinayo dastuurka iyo cod dheerida lagu diiddan yahay, haddana cid codkaa maqasha ama isku dayda inay dhagaysato ma jirto. Aan ka billaabo inay si toos ah beelo Soomaaliyeed uga horyimaadeen dastuurkan, iyagoo sheegay inaan dan Soomaali iyo mid samaanba lagu saabayn dastuurka, yaan lagu xugmin beeshii diidda dastuurkan dawlad diid, illeen maqalka eragan ayaa nagu batay dharaarahan, qofkii aragtidiisa cabbirana noqonayo dawlad diid iyo qaswade, aniga iima bixin!
Isla sida ay beelahaa Soomaaliyeed u diideen, waxaa iyana u diiday dastuurkan siyaasiyiin ay ka mid yihiin Mudane Cali Khaliif Galayr aasaasaha Maamulka “Khatuma State” wuxuuna sheegay dastuurka oo sidan lagu hirgaliyaa inaysan dan ugu jirin umadda Soomaaliyeed.
Dhanka kale, isla duridda dasturka waxaa isna docda fog ka soo far fiiqay mudane Faysal Cali Waraabe, oo sheegay inuusan Soomaalina anfcayn, Somalinad uusan waxna u tarayn.
Ujeedka ma ahan in druid iyo dacaayad kaliya loo joogo, balse, maadaama dadkii dhagaha laga laga furaystay, ayaa qof walba kalkiis hadlay, haddii la leeyahay yaan la hadlinna waaba mid kale.
Ururadda Bulshadda Rayidka oo shirkii uga socday Uganda kasoo saaray qodobo ku wejehan marxaladda xilliga kala guurka ee Soomaaliya.
By Xafiiska Wararka Moment Media Group – Muqdisho, Somalia –
Muqdisho, March 29, 2012 – MMG- Shir ay ka qeybgaleen ku dhowaad 100 xubnood oo ka kala socday ururrada Bulshada Rayidka ee ka jira Soomaaliya, islamarkaana looga gol lahaa sidii ay Bulshada Rayidka Soomaaliyeed kaalin muuqata uga qaadan lahaayeen howlaha la qabanayo muddada ka harsan xilliga kala guurka ee dowladda Soomaaliya oo ku eg 20-ka Bisha August ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay Magaaladda Entebbe ee dalka Uganda.
Kulankani oo ahaa mid ay soo qabanqaabiyeen hay’addaha IIDA/COSV oo ka kaashanayay xafiiska Qaramadda Midoobay ugu qaabilsan arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya (UNPOS) ayaa sidoo kale goob-joog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo wakiilo ka socday xafiiska UNPOS, dublumaasiyiin iyo wakiilada hayaddo kale oo caalami ah ayaa waxaa gunnaanudkii shirkaasi ay isku raaceen xubnihii ka qeybgalayay qodobo si cad u qeexaya howlaha ay qabanayaan ururadda kasoo jeeda bulshada rayidka si ay dowr muuhim ugu yeeshaan soo xulida xubnaha ka midka noqonaya dadka la filayo in bisha dambe ee April loo qabto shirweyne loogu codeynayo dastuur cusub oo ay yeelato Soomaaliya.
Inastoo mararka qaarkood ay doodaha la isku weydaarsanayay kulankaasi ay ahaayeen kuwo heerka xaraaradppda uu sare u kacayay ka gadaal markii dhinacyadii metelayay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ku adkeystay in saxiixayaasha jeshiiskii Garowe 2 aan marna lala wadaagi Karin ansixinta xubnaha loo soo xulayo baarlamaanka cusub iyo ergada codka u qaadeysa dastuurka lagu wado in dhamaadka bishan lasoo qabyo-tiro, balse doodo badan kadib ayaa ugu dambeyntii ay ka qeybgalayaashu isku raaceen qodobo dhowr ah oo ay ka midka ahaayeen:
In ururada bulshadu raali ka yihiin habka geedi socodka nabada ee rood mapka
In ay ka mahad celinayan tiradii laga siyay haweenka Soomaaliyeed shirkii Garoowe
In ay kala shaqeynayaan madaxda Qaranka sidii looga baxi lahaa nidaamka kmg
In la mideeyo codka bulshada rayidka .
Shirweynuhu waxaa uu abuuray Gole la magac baxay isbehysiga uruurada bulshada rayida, kaasi oo ka koban 30-xubnood oo lagu saleeyay qaab dhismeedka ururada bulshad raydika.
Shirweynuhu waxaa uu beesha caalamka ugu baaqay in ay goob jog ka noqoto xaqiijinta geedi socodka nabada Soomaaliya
Shirkan oo socday muddo afar maalmood ah ayaa waxaa xiritaankiisii kasoo qeybgalay ku xigeenka wakiilka Qarammadda Miidoobay ee Soomaaliya, iyadoo dhinaca kalena ay mas’uul ka tirsan hay’adda IIDA/COSV, Hibo Yaasiin ay halkaasi ka balanqaaday iney sii wadi doonnaan gacan-siinta Guddiga 30 xubnood ee howlaha xillaga kala guurka u meteli doona Bulshadda Rayidka Soomaaliyeed.